XIRIIRKA KA DHAXEEYA TOOSNAANTA IYO GUUSHA - مركز الكتاب للبحوث والدراسات
نشرت بواسطة: Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan في مقالات 23 فبراير، 2020	0 576 زيارة
Qof walba oo naga mid ah wuxuu jecelyahay inuu ka guul gaaro yoolasho uu higsanayo, wuxuuna ka baqaa inuu guuldarraysto, waxaase iswaydiin mudan sidee qofka uu guul ku gaari karaa ugana baaqsan karaa inuu fashilmo.
Qeexsita guusha ayaa yeelata dhowr micno luqad ahaan, hadaan 3 luqadood aan kasoo qaadano dulucda iyo gunta Eray bixinta Guul waxay noqon kartaan sidan:
Guul(-sha) dagaalka ama tartanka oo lagu adkaado; lib; libin; liibaan (Qaamuuska Af-Soomaliga Keena diid).
Waxaa lagu sheegay inaad lib ka keento wax aad jeceshahay inaad gaarto oo aad gacanta ku dhigto (Qaamuuska Almacaanii)
Wax keena maxsuul fiican “something that achievesgood results” (Cambridge Dictionary)
Waxaan laqabnaa qallinlayda kala duwan ee qeexista ka bixisay guusha inay tahay wax qof walbaa uu jecelyahay inuu gaaro oo qiimo ku kordhiya noloshiisa, iyadoo ay dhici karto in dadka qaar ay guul u arkaan wax xun oo ay yool ka dhigteen inay gaaraan sida; inuu hanti dadweyne dhaco, ka shaqeeyo mari habaabinta bulshada, awoodda bulsho ay leedahay marooqsado, abuuro fitno colaad dhax dhigi karta bulsho isjecel; iyadoo yoolkiisu uu yahay burburinta bulshadaas, IWM. Laakiin guul manoqonayso oo falalkaas gurracan oo idil ma ahan wax qofka toosan uu u bareeri karo mana mahdiyaan bulshada hadii qof gafkaas uu gaysto wuxuuna mutaa ciqaab iyo carro rabi.
Hadaba guusha waa libin kobcisa qof iyo bulsho horumarna kusoo kordhisa heer walba oo ay joogto, guusha ugu weyna qofku iyo bulshadaba inay helaan waa raali’ahaanshaha Eebe SWC sida ay Asxaabta nabiga ahaa ee hormadii ugu horaysay ay arinkaas ku guulasteen:
)جَزَآؤُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّـٰتُ عَدۡنٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ رَبَّهُۥ البينة:8
“Abaalkooda ay Eebe agtiisa ku leeyihiin waa Jannooyin Nagaadi, dhexdeedana ay dureeri Wabiyaal ay kuna waari dhexdeeda waligood, Eebaa ka raalli noqday iyana way ka raali noqdeen, arrintaasna waxay u sugnaatay Ruuxii Eeba ka yaaba” (Al-Bayinah:8)
qormadan kooban waxaan si gaar ah ugu koobnaanaynaa iyadoo baababka Guushu badanyahay xiriirka ka dhexeeya Guul iyo toosni. Horay waxaan ugu soo qeexnay Guusha, hada aynu iyadana qeexno maxay tahay Toosnaan: waa wax hagaagsan oo aan Qalqallooc ku jirin sida uu dhigayo Eraybixinta Qaamuuska Soomaaliga, mana ahan eray yeelan karno micnooyin qarsoon oo eraygu waa mid qof walba uu fahmi karo.
Toosnaantu waa in qofka uu Wax joogteeyo uusana ka tagin, toosnaanta waxayna noqotaa Rumayn dhab ah sida uu qabo (Qaamuuska Lisanul Carab)
Eebe wuxuu quraankiisa ku yiri:
(وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُون) الأنعام:153
“Kaasina waa Jidkayga toosan ee Raaca, hana Raacina Wadiiqaha oo idin la kala Tago (Idinka leexiyo Jidka Eebe) Saasaana Eebe idin faray inaad Dhawrsataan”. (Ancaam:153)
Rasuulka SCW wuxuu yiri:” waxaad tiraahdaa waan rumeeyey, ka dibna Toosnow”
Qofka toosan wuxuu ku tilmaamanyahay dhaqanka Suuban ee Islmaka, taasoo ay ku dheehnayd Shakhsiyada Suubanihii Rasuulka (SCW), wuxuuna dhaqanka wanaagsan ee toosan kula noolaaday bulshadiisa, Qoyskiisa, Asxaabtiisa iyo xitaa kuwii aan muslimka ahayn. mana ahayn Nabigu Axad sida dharka marba isaga bixiya Akhlaaqda ee wuxuu ahaa mid toosan oo aan isbadbadalin, sidaasayna ahaayeen Asxaabtiisa (RHN), waxayna tusaale u haayeen Dhibrinta, Cisiga, Laabfurnaanta, Runsheega, Deeqsinimada, Iskhaashiga iyo huridda. Qofka Islaamka ku toosana wuxuu hab-dhaqan toosan kula dhaqmaa inta kale. Ma ahan mid wax khiyaama, xumaanta dadka u qariya, gacan adag, beenlow ah, damac badan, wax-isdaba mariya, Muuqaallo dadka ku dhagra, ee Hab-dhaqankiisu meel walba uu joogo wuu ka muuqdaa, Gurigiisa, Caruurtiisa, Ehelkiisa, Deriskiisa iyo goobta shaqada.
Hadaba, toosnaan waxa aan ula jeedno waan wada fahanay, iyadoo aan kusii kabayno, qofka guush doonahaya waa inuu yahay qof ku taagan Qiyamka iyo Mabaadi’da waxa uu rabo in ka guul gaaro amaba uu ilaaliyo Xeerarka iyo shuruucda loo dajiyey howsha uu rabo inuu ka guul gaaro:
Tusaale, Madaxweyne ayaa raba inuu dalkiisa gaarsiiyo horumar inta uu hayo muddo xileed, waxaa faral ku ah inuu ku toosnaado Sharciga dalka iyo qorshaha horumarinta ee loo dajiyey dalka si yoolkaas uu u gaaro, hadiise uu barbar maro waxaa adkaanaysa inuu ku guulaysto wixii loo doortay, waana dhacdo bulshada Soomaalida ku soo noqnoqota inay doortaan Madax aan toosnaan lahayn kana dhabayn fulinta ballamaha ay qaadaan, waxayna ku tuntaan sharciga dalka.
Wadaad Caalim ah oo Cilmiga laga raacdo, isaguna si uu cilmigiisa u miro dhalo oo bulshada ugu duxo, waa inuu ku toosnaadaa Miraha Nusuusta diiniga ah ee uu mariyo uuna ka dhowrsado inay is-khilaafaan amarada kutubta ku qoran iyo hab-dhaqankiisa.
Ciidmada Amniga iyo Booliska oo laga filayo sugidda Amniga dalka ayna tahay inay dadka uga horeeyaan ka caaganaanta dhaqamada xun iyo maandooriyayaasha, hadaysan sidaa yeelin kuma guulaysanayaan howsha looga seexday. (Nin lagu seexdow ha seexan)
Jaamacadaha iyo xarumaha Waxbarashada hadaysan ku mitidin inay soosaaraan Ardayn dhisan oo lagusoo ababiyey Duruus leh Manhaj Dhamaystiran oo lagala soo dagaalamay Waxbarasho duran oo daldaloollo leh, waxaa adkaanaysa inuu dalka horumar ka gaaro Cilmiga iyo Technologiyada.
Gabadha aan Xishoodka iyo Xushmada ku toosnaan, oo hiyi raacda mowjada baraha bulshada, kana tagta dhaqankeeda suuba waxaa adkaanaysa inay ku guulaysato Guri xasiloon iyo Ubad Shaxshax ah.
Tusaalooyinkaa kore waa qayb ka mid ah sida ay isugu daabanyihiin toosnaanta iyo Guusha, waxaanse si gaar ah ugu sii xoojinaynaa Xaqiiqo ay isku raaceen Culimada Cilmiga Bulshada kaasoo ah:
Albaabada Guusha laga galo waa kun waxaana ugu horeeya toosnaanta, suura gal ma ahan qof aan toosnayn inuu guulaysto. Inta guusha gaarta waa in yaroo kooban oo toosan.
Eebe wuxuu u jideeyey shanta Salaadood inuu nagu baro toosnaanta, Salaadda waxaad ku baranaysaa:
Ilaalinta waqtiga, taasoo muhiim u ah xaqiijinta yoolka si uu uguulaysto.
La dagaalanka Wahsiga iyo Caajiska; oo gun u ah marka howl la qabanayo. Waxaa hubaal ah qof Salaadda Subax ka seexday inuusan ka guulaysanayn Caajiska iyo Wahsiga, hadii uu wax uun gaarana ma yeelanayso Barako.
Waa Caafimaad iyo Fayoobi Maskax iyo Maanba; qof fayow ayaa guulaysta.
Hogaansan, Iskaashi iyo Kala-dambayn; guusha waxaa sal u ah intaas Sallaadu nabarayso, oo qofkaan iskaashi lahayn guul weyn ma xaqiijin karo gaar ahaan marka Yoolka uu la xiriiro bulsho ama shaqo iskaashi u baahan, Iskaashiguna kama maarmo hogaansan iyo kala-dambayn.
Salaada Barako ayay leedahay; Qofkii Guul rabana waa in loo barakeeyo Xoogiisa iyo Xeeladiisa.
Salaadu waxay reebtaa Xumaanta iyo Munkarka; Guusha si aan u gaarno waa inaan ka baraxtiranahay dhaqamada xun.
Salaadu waa Markhaati kac Iimaankaaga gaar ahaan marka aad Masjidka ku tukatid; tani waxay damaanad kusiinaysaa iyo aqoonsi bulsho inaad tahay qof la aamini karo oo guulaysan kara.
Qofka ka seegseega Salaadiisa; waxaa hubaal ah inuusan ku guulaysanayn arimihiisa kale.
Salaaddu waxay ku bartaa Tartanka, oo Safka hore in lagu tartamo; waxay ku dhaxalsiinaysaa inaad u tartanto guusha ugu horaysa.
Salaada Waa khushuuc iyo inaad Laabtaada waxaan iyada ahayn kasaarto iyo mashquulka dunida; taas waxay ku baraysaa inaad Yoolka aad leedahay Diirada saarto (Concentration) si aad ugu guulaysato.
Iyo Dheefo kaloo badan oo ay salaadu leedahay.
Qof ayaa iswaydiin kara, gaaladuba waxaas oo aqoon ah iyo horumar ayay gaareen mana tukadaan ee maxaa isku xiray guusha iyo Salaada?, Jawaabta ayaa noqonaysa qof walba waxa Sharciga u ah hadii uu ku toosnaado amuuraha kale way ufududaadaan, qofkii khiyaana waxa uu rumaysanyahayna guul kama keeno walxaha kale. Iyadoo Muslimka u sii dheertahay Hadaf Aduun iyo mid Akhiro oo qofku rajaynayo in lagu abaal marayo falkasta oo uu falayo xitaa haday aduunyo la xiriirto.
Shirkadaha Dunida ugu waaweyn Sida Samsung, Apple, Windows, Toyota, IWM, maamulayaashooda waxay diraasaduhu sheegaan inay leeyihiin waqtiyo u gaar ah oo ay ku gutaan Cibaadooyinka diimaha ay aaminsayihiin amaba ay la gaar noqdaan Naftooda gaar ahaan xilliyada Waabariga ka hor, waxayna shaqada soo galaan iyagoo soo gutay ama Jirdhis, YOGO, Orod, Feker, IWM. Waxayna taasi tilmaam u tahay in qofka raba inuu guulaysto uu leeyahay cibaado uu guto taasoo uu aaminsanyahay, Cibaadada ugu wanaagsan oo qof gutana waa Salaada iyo Quraan akhriska gaar ahaan aroorta hore subixii, qofka raba inuu guulaystana waa inuu Alla ku xirnaadaa oo ku tiirsanaadaa Ducadana badiyaa gaar ahaan habeenkii oo uu yeesho waqti uu la gaar noqdo naftiisa.
Qorshe Howleeda kugu caawin kara inaad waqtigaaga ka faa’iidaysato:
4:00 Am – 7:00 AM (Salaad, Quraan, Duco, Jimicsi iyo Ahkris)
7:00 Am – 5:00 PM ( Shaqo, Xoogsi, Ganacsi IWM)
5:00 PM – 10:00 PM (Waxbarasho, Qorsheyn, Xiriir Samayn iyo wixii aad isku hormarint karto)
10:00 PM – 4:00 AM (Si fiican u seexo, waadna dhex gelin kartaa Cibaado sida istiqfaar iyo All bari, Saqda dhexe, kana fogow inaad ku mashquusho Baraha Bulshada sida FB, Whatsappka, Instegramka, Tiktok IWM).
Ugu dambayn, qof walba oo naga mid ah wuxuu jecelyahay Guusha, waxaana ogaanay Guusha inay ku xirantahay Toosnaanta. Toosnaanna waa Diin iyo Dhaqan Suuban ee aynu labadaas ku dadaalno.
guusha toosnaanta	2020-02-23
Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan
الوسوم :guusha toosnaanta
السابق: محاكمة البشير وصفقة القرن ومعارك التكالب الرابع
التالي: DHALAAN KU DAYACAN DUGEENA
عن Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan
Qoraa Madaxa Jamciyadda Tadaamun
بواسطة Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan